Iingcebiso ngoKhuseleko zokukhusela abaSebenzi bakho abaLodwa (A10001) | Izisombululo ze-OMG
Iingcebiso zoKhuseleko zokukhusela abaSebenzi bakho abaLodwa (A10001)
Umsebenzi waseLone ngumntu osebenza yedwa, kude neendawo eziqhelekileyo ngaphandle kokusondelwa okanye ukujonga ngqo kwaye usebenza kumacandelo ayingozi kakhulu njengokwakha, izixhobo zendalo, ukhathalelo lwempilo, ukunyanzelisa okanye ukuthutha. Kukho ikakhulu iindidi ezimbini zabasebenzi abodwa. Okokuqala, ngabo basebenza kwisikhululo somsebenzi esinikezelweyo / esinikezelweyo; abo basebenza ngaphakathi kwendawo yeshishini, okokuthi umntu oza kuqala eofisini enze imisebenzi efana nokuvula amasango, ukucoca iofisi okanye ukugoduka emva kokuvalela into nganye eofisini. Okwesibini, ngaba abo bashukumayo; abasebenzi abahambahamba bodwa abakwiindawo ezikude kwaye basebenza ngaphandle kweshishini. Ngokubhekisele kwiMithetho nemigaqo, luxanduva lombutho ukubonelela ngokhuseleko olunxulumene nomsebenzi kwabasebenzi bebodwa. Apha siza kuthetha ngomngcipheko oqhelekileyo onxulunyaniswa nabasebenzi bodwa, indlela iinkampani okwangoku eziqinisekisa ngayo ukhuseleko lwabasebenzi kunye nezisombululo zangoku kwezi ngxaki zingapheliyo.
Umngcipheko oqhelekileyo kubasebenzi baseLone
Ukuwela ngendlela okuyingozi okanye ukuwa: Yenzeka rhoqo xa umsebenzi eyedwa esebenza kwindawo yokulwa, eluphahleni lwendlu, elelini okanye kwindawo ephezulu. Oonobangela baphambili emva kokuwa banokuba ngumhlaba omanzi, i-Stair kunye namanqanaba, ukuwa kwigumbi lokuhlambela kunye nokonakalisa umphezulu. Esinye isizathu isenokuba sisimo sengqondo esingesiso sochwephesha, umzekelo, ukunxiba izihlangu ezinganyangekiyo emsebenzini ezinokuthi zikhokelele ekutyibilikeni komnye umzekelo akunakuba kukhuseleko ngelixa usebenza ukuphakama.
Imeko kaxakeka kwezempilo: Ezona meko zixakekileyo zihambelana nezempilo kubasebenzi ababodwa kukubetha kwentliziyo kunye nokubetha okungajika kube yingxaki enkulu enxulumene nezempilo ukuba uncedo lokuqala alunikezelwanga ngokubaluleka. Phakathi kweemeko zoxinzelelo ezinxulumene nomsebenzi; Uxinzelelo olubi kakhulu olunobungozi luyingozi ngakumbi. Uxinzelelo olubi kakhulu yingozi, ukwenzakala okanye nantoni na eyenzakalisayo emsebenzini enokubangela umntu ukuba abe noxinzelelo ngokweemvakalelo. Ingakumbi kubasebenzi bebodwa uxinzelelo olunobunzima lungakhokelela kwiingozi ezinkulu.
Ubundlobongela emsebenzini Xa umsebenzi omnye asebenza kwindawo ethe qelele kunamathuba okuba ilungu eluntwini linokuguquka limlimaze kwaye umbutho awunakuphendula kwangexesha. Olunye ugonyamelo lwabasebenzi inokuba yingxolo evela emsebenzini umntu anokuziva egula okanye aphulukane namandla akhe okumamela.
Umlilo kunye nokuqhuma: Abasebenzi abasebenza kwimigodi okanye abajongana ngokusondeleyo nezinto ezinxulumene nombane; banokuba ngamaxhoba omlilo kunye nokuqhuma. Oku kungancitshiswa ngokusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo kunye nokubambelela ngokungqongqo kwi-SOP. Nangona kunjalo, umlilo ungunobangela wokungahoyi okunokuthi kukhokelele kuqhume kwaye abasebenzi abodwa abanakho ukujongana nale meko bebodwa. Abasebenzi abasebenza yedwa kufuneka baqeqeshelwe ngokwaneleyo ukujongana nezi meko.
Ukuvezwa kwemichiza: Abasebenzi abasebenza bodwa abasebenza elebhu bahlala bevezwa ziikhemikhali ezinokuthi zikhokelele kwingxaki yemicimbi yezempilo eqatha ngakumbi ukuphefumla.
Imeko yangoku: Inkampani iqinisekisa njani ukhuseleko lwabasebenzi abasebenza bodwa
Okwangoku, iinkampani zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo ukujongana nemingcipheko eqhelekileyo abajongana nayo abasebenzi bodwa. Okokuqala, eyona ndlela ixhaphakileyo kukubanika izixhobo zokuzikhusela (buqu) ezinokubanceda ukuba bakwazi ukujongana neemeko ezingafunekiyo. Okwesibini, imibutho isebenzisa imiqondiso yokunxibelelana non-ngamazwi ukuze kuthintelwe nakuphi na ukuphoswa kabukhali okukhona xa umgangatho umanzi, babeka apho kanye xa iikhemikhali zikhoyo kulebhu, zineempawu zengozi. Ukongeza kule mibutho iya kutyelelo rhoqo kunye nonxibelelwano kusetyenziswa unomathotholo kunye neefowuni zeendlela eziqhelekileyo zokujongana nale meko. Zonke ezi ndlela ziqhelekileyo zisetyenziswa kuyo yonke imibutho ukuze kubonelelwe iFomu yabasebenzi kwindawo ekhuselekileyo nenempilo. Kodwa njengokuba ihlabathi liyaguquka; ke, njengeendlela kunye neendlela zokuthintela ezi meko zingafunekiyo. IHelp sisisombululo esinye sokuma kuko konke ukuxhalaba kwakho. Imveliso yethu iHelp ayinikezi kuphela isisombululo kule micimbi, kodwa ikwasebenziseka lula. Umhlaba uyatshintsha, izinto ezithandwayo ziyaguquka, ayifanelanga ukuba sitshintshe? iHelp inokwenza imicimbi yakho enxulumene nomsebenzi ihambe kakuhle kwaye ibe lula; Yiba nesishwankathelo esingezantsi;
IHelp - Inkqubo yoMntu eseZantsi-Isisombululo soKhuseleko saBasebenzi
Yeyona nto incinci yehlabathi yokulandelela i-3G GPS yokubonelela ngesixhobo esibonelela ngesibonelelo esipheleleyo sezisombululo kubasebenzi abodwa. Iza kunye ne-sim kwaye ibandakanya ne-tracker ye-GPS eya kukunika ixesha lokujonga ixesha labasebenzi abangabodwa. Ngaphandle kwalonto, inesisiva sokungena ekuweni ngokunjalo esithumela ngokuchanekileyo ukuwa kwesilumkiso kubaongameli. Ikwabonelela ngesicelo se-smartphone yasimahla onokuthi ngaso ujonge kubasebenzi bakho. Unokuzibuza ukuba isebenza njani le sixhobo? Xa umsebenzi yedwa esengozini, unokucofa iqhosha kwisixhobo esiya kuthumela umyalezo kunye nendawo akufowunele nayo. Okwesibini, ukuba umntu uwe kwi-Height ye-sensor ye-sensory yayo, uya kuthumela umyalezo ozenzekelayo oquka indawo akuyo. Nangona kunjalo, unokuseta indawo ethile yomsebenzi ukuba uya ngaphandle kwendawo leyo umyalezo uya kuziswa kuwe nendawo yakhe. Ikwenza ukuba ukwazi ukunxibelelana ngelizwi ngeendlela ezimbini kunye nomsebenzi yedwa, Ngale nto ungathetha nabo kwaye wazi malunga neemeko ngqo abajongana nazo. Ikwanayo inqaku ngokujonga indawo owasebenza kuyo yedwa ungayazi indawo ebekade esebenza kuyo ngaphambili. Ngamafutshane, inika isisombululo sakho esipheleleyo sokujonga abasebenzi kunye nokunciphisa ubungozi obuqhelekileyo obunxulumene nabasebenzi bodwa.
3433 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-8 Namhlanje